I-Getaway yasehlathini efihlakeleyo - I-Airbnb
I-Getaway yasehlathini efihlakeleyo
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKyle
Suka kuyo yonke into kwikhabhinethi yethu ye-backwoods epholileyo, indawo efudumeleyo nenomtsalane yasekhaya yokuloba, ukutyibiliza okanye uhambo lokuhamba intaba kwindawo eyintlango yoMlambo iMargaree. Singaphaya kwendlela esuka kuMlambo iMargaree, ecaleni kwe-905 skidoo trail, kunye nohambo olufutshane ukuya kwindawo enkulu yokutyela yasekhaya yonyaka eBig Intervale Fishing Lodge. Obona busika bunekhephu, isibhakabhaka esineenkwenkwezi, imibala eqaqambileyo ekwindla, kunye nokuqubha okukhulu emilanjeni engasese ehlotyeni, naliphi na ixesha lonyaka lixesha elifanelekileyo lokutyelela.
Ikhabhinethi yethu entsha kraca kodwa irustic ine-off-grid vibe kodwa inobutofotofo bale mihla, uyilo lwendlu encinci kodwa iphangalele ngokwaneleyo 5, isilingi ephezulu enefestile ezininzi ekuvumela ukuba uzive ngathi uhleli ehlathini, kodwa ngokufudumala. yesitovu seenkuni ukuze uphumle. Chitha imini ufunda kwaye ukonwabele ukuthula okupheleleyo, okanye udlale iirekhodi ezivela kwingqokelela yethu ye-eclectic. Chitha ubusuku ngaseziko, ujonge ezinkwenkwezini. Ukurhola kwigumbi lokulala elipholileyo esilibiza ngokuba yiNest kwaye sifumane ubuthongo obumnandi kwibhedi yethu yamagwebu.
I-HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Apple TV, I-Disney+, I-Netflix, I-Roku
Malunga nemizuzu eli-15 uqhubela phambili kwindlela yegrabile, ikhabhathi yethu ikwintlambo entle ngokwenene nefihlakeleyo apho unokuphumla ngokupheleleyo kwaye uyonwabele indalo. Ukuhamba ngemizuzu emihlanu ukuya emlanjeni, kwaye ujikelezwe zii-backwoods skidoo / quad trails, unokuchitha imini ngokulula uhlola amahlathi kunye nomlambo. Ebusika, le yeyona ndawo ilungileyo yokuhamba ngekhephu, kunye nekhephu elithembekileyo kwiphondo. Okanye yiza neskii sakho esinqumla ilizwe okanye izihlangu zekhephu kwaye ujonge iindlela ezininzi ezikujikelezileyo. Kwiinyanga ezifudumeleyo, ichibi leWard's rock yindawo entle yokuqubha/yokuloba kunye nephuli yaseMangcwabeni umgama omfutshane onokuba lulwandle lwakho lwabucala losuku. Kanye xa udlula kwiqula leWard's rock yiBig Intervale Fishing Lodge apho unokufumana isidlo esimnandi kwindawo entle. Simalunga nemizuzu engama-30 ukuya eMargaree Harbour beach okanye umgama omde ukuya eCheticamp nakwiHighlands. Ukuqhuba ecaleni koMlambo iMargaree kwaye emva koko unyuke unxweme ukuya kwiPaki yeSizwe lolona hambo luhle eNova Scotia kulo naliphi na ixesha lonyaka.
Ngelixa ndihlala kude, ndiyafumaneka ukuba ndiphendule nayiphi na imibuzo onokuba unayo, kwaye abaququzeleli bethu uCindy noDanny bahlala ezantsi kwendlela ecaleni kwecawe encinci ukuba ufuna nantoni na bayakuvuyela ukukunceda.
Inombolo yomthetho: RYA-2021-05251437037261624-3268
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Margaree Valley